UKUPHAKANYISWA KWEPATIO VS DECK (I-PROS AND CONS) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Ukuphakanyiswa kwePatio vs Deck (i-Pros and Cons)
Isikhokelo somahluko wepatio ephakanyisiweyo vs kumgangatho kubandakanya ubuchule kunye neengozi, iindleko kunye nemibono yoyilo eyaziwayo. Xa uzama ukwenza okona kulungileyo kwikhaya lakho njengoko uhlaziya, unokufuna ukuphuma phandle. Unokongeza ixabiso elininzi ekhayeni lakho kunye nendawo yokonwabisa ngokongeza indawo yokuhlala yangaphandle. Oku kunokubandakanya ukhetho olunje ngeepatios eziphakanyisiweyo kunye neekhonkco.
Nangona kunjalo, xa kuziwa ekukhetheni phakathi kwezi zimbini xa ilixesha lokucwangcisa ukulungiswa kwakho, kufuneka ube nolwazi lokwenza isigqibo esifundileyo. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uthathe ixesha lokujonga zombini izinto ezilungileyo kunye nezibi ngokhetho ngalunye.
Kwesi sikhokelo, siza kuqhekeza yonke into oyifunayo malunga neepatios eziphakanyisiweyo vs kumgangatho. Oku kubandakanya ubuhle kunye nokubi kolunye lwezi zikhetho ukuze wazi ukuba ukhetho ngalunye lukunika ntoni.
Ukuphakanyiswa kwePatio kunye neNdleko yeDisk
Ukuphakanyiswa kwePatio vs Deck ulwenziwo
Ukuphakanyiswa kwePatio vs Deck Durability
Ukunyuswa kwePatio vs Ukugcinwa kwedesika
Iindleko sisivumelwano esikhulu xa kufikwa kumba wokumiselwa kweenkcukacha zohlaziyo lwakho. Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwabanini makhaya lubotshelelwe yimali ekufuneka bayityale kutshintsho kumakhaya abo. Ukuba kukho into engekho kuhlahlo-lwabiwo mali, inokuba sisaphuli sokwenyani sokubandakanya olo hlaziyo kwisicwangciso sakho.
Xa isiza nokuthelekisa iidesika ezingasemva kwaye bakhulisa iipatiyo ngokubhekisele kwiindleko zabo, iipatio eziphakanyisiweyo ziphumelele kwiidesika. Kuyinyani kwizizathu ezimbalwa.
Okokuqala, iindleko zangaphambili zokwakha ipatiyo ephakanyisiweyo zingaphantsi kokwakha ipaki. Iindleko eziqhelekileyo zokwakha ipatio zihlala ziphakathi kwe- $ 1,850 kunye ne-5,161 yeedola. Olu luhlu olubanzi kuba luxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo kubandakanya ubungakanani bepati kunye nezinto ezakhiwe nazo.
Kwelinye icala, ukwakha i-deck kungabiza phakathi kwe- $ 4,380 kunye ne- $ 10,080. Ngelixa uluhlu olubanzi, luhlala ngaphezulu kunoluhlu lweendleko zepatio. Yahlukile Iindidi zomgangatho wokuthuka , iintlobo zeenkuni kunye nomsebenzi wasekhaya kunye neendleko zamaplanga zonke zinokufaka isandla kwindleko.
Iindleko zepatio nazo zisezantsi ukugcina kunendawo yokuhlala. Oku kuthetha ukuba awuzukutyala imali eninzi phantsi komgca ekugcineni ipatio yakho ikwimo ephezulu xa kuthelekiswa neekhonkco. Siza kuhamba ngakumbi kwizinto ezingena kwipatio kunye nokugcinwa kwedesika kamva.
ufanele ukutshata nini
Ukwenza ngokwezifiso kubhekisa ekubeni ungatshintsha kangakanani ukubonakala kwepatio yakho okanye idesika ephakanyisiweyo ukwenza uyilo lwakho ngendlela ofuna ukuba lubonakale ngayo. Kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo le nto xa usenza isigqibo phakathi kwezi zimbini ukuqinisekisa ukuba indawo yakho yangaphandle ijongeka kanye ngendlela ofuna ngayo.
ungaziqasha iilokhwe zomtshato
Le yenye indawo apho ipatio igqwesa ngaphezulu komgangatho. Oku kubangelwa yinxalenye yokukhethwa kwezixhobo. Iidesika zihlala zenziwe ngomthi.
Ukulunga, oku kukubonelela ngegumbi elininzi lokuzama ngeendlela ezahlukeneyo zomthi, imibala yazo, kunye neepateni zokutya. Okwangoku, ayinikezeli iyantlukwano efanayo ukuba ukhetha phakathi kwezinto ezahlukileyo ngokupheleleyo, njengoko unokwenza ngepatio.
Ngaphezulu koko, iipatios zinethuba lokubandakanya ikhonkrithi kunye nepavili zekhonkrithi kwirepertoire yabo. Uncedo apha kukuba ikhonkrithi inokudayiswa phantse kuwo nawuphi na umbala.
Oku kuthetha ukuba awukhawulelwanga kumbala wendalo wezinto xa usenza izigqibo zoyilo kwipatio yakho njengoko ubuya kuba kumgangatho. Yahlukile iintlobo zeepatios Banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho ngenxa yokwahluka kwezinto zabo.
Unako ukubeka izinto ezingaphezulu kwipatio. Iidkski zilinganiselwe kubungakanani bokubamba ngelixa iipatios zingenjalo. Oku kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba uthathe umda wobunzima xa uhlobisa okanye usenza i Uyilo lwepatio ebiyelweyo njengokuba.
Ukuzinza yenye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa kuziwa kulungiso lwakho kukudibanisa kuya kuhlala ixesha elingakanani. Oku akuxeleli nje kuphela ukuba ungakanani umsebenzi oya kuwufaka, kamva, ukugcina ikhaya lakho libukeka likhulu kodwa ungakanani oza kuluchitha ekuhambeni kwexesha.
Emva kwayo yonke loo nto, into enokuqina okuzinzileyo kuya kufuneka ibuyiselwe kwangaphambi kokuba ibe yinto eyomeleleyo.
Kule meko, konke kuya kumbandela. Unokukhetha okuninzi malunga nokuba ufuna ukuba zenziwe njani ezi zakhiwo kwaye kubalulekile ukuba uzithathele ingqalelo. Ngaphezulu kwesibheno sabo sobugcisa, ezi zinto zibonelela ngamanqanaba ohlukeneyo okuzinza kweprojekthi.
Ngenxa yoku, iipatios eziphakanyisiweyo zihlala ziphumelela ngaphezulu xa kufikwa kuzinzo. Kungenxa yokuba iidesika zihlala zenziwe ngomthi.
Ngokuchasene noko, iipatiyo zihlala zisebenzisa izinto ezizinzileyo njengezitena, ikhonkrithi, okanye ilitye ukwenza imveliso egqityiweyo. Ngokwemvelo, ezi zinto zihlala ixesha elide, zisenza ukuba iprojekthi egqityiweyo yomelele ngakumbi.
Ukuba ufuna i-deck, nangona kunjalo, kukho incam enye onokuyisebenzisa ukuqinisekisa ukuba ipaki yakho ihlala ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Unokongeza ukuzinza kuyilo ngokusebenzisa izinto zomthi ezidityanisiweyo endaweni yomthi njengoko injalo. Oku ngekhe kukunike ixesha elifanayo njenge Ipatio yamatye kodwa iya kuyonyusa ixesha lobomi kumgangatho wakho!
Ukuba uthelekisa ipatio kumgangatho owenziwe ngomthi wendalo, idesika inokugcinwa okungaphezulu kunakuyo.
Ukugcina iinkuni zintle kwaye zikwimeko entle, kuyakufuneka uqiniseke ukuba ukugcina idesika icocekile kunye nokuyihlamba amandla, ukuyigcina okanye ukuyipeyinta, kunye nokutywina ideki kwakhona rhoqo emva kweminyaka embalwa. Sibhale iqhekeza ukupeyinta kumgangatho ngokuchasene nebala apha ngolwazi oluthe kratya.
Njengokuba besesitshilo ngaphambilana, ungayenza lula le nkqubo kuwe ngokusebenzisa izinto zomthi endaweni yomthi.
Iipatios zihlala zomelele ngakumbi, oko kuthetha ukuba awuzukuchitha imali eninzi kulungiso ukuba ipatio ikhathalelwe kakuhle.
Ekuphela kwezinto oza kufuna ukuzijonga kwiipatios kukuba izinto ezisetyenziselwa ipatio zihlala zikwazi ukuqhekeka ukuba umhlaba ongaphantsi uzaliswa ngamanzi kwaye uqala ukuthamba. Ipatio inokuthi ithambekele ekuguqulweni kombala ukuba umxube awulungiswanga ngokufanelekileyo.
Yintoni oyithandayo emva kweplanga okanye ipatiyo ephakanyisiweyo? Sazise iingcinga zakho okanye sabelane ngemibuzo yakho kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
Uyilo olunxulumene ngakumbi jonga kwinqaku lethu ku izimvo zepatio yezitena .
ifanele ilingane njani i-tux
ukuba uthini kwikhadi lokuzibandakanya
U kobe bryant usatshatile
yintoni lomntu ubizwa etshata nawe